सोलु हालचाल Coming Up Next » चलचित्र गित
नागरिकमा अपनत्व आबश्यक छ ।
तुलाराज सुनुवार जिल्ला विकास समिति सोलुुखुम्बुका योजना अनुगमण तथा प्रशासकिय अधिकृत हुनुहुन्छ । बिगत करिव एक बर्षदेखी सोलुखुम्बुमा कार्यरत सुनुवार विकासका काममा थुप्रै सुधारको आबश्यकता देख्नुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले उपभोक्तामा अपनत्व जगाउन सक्नु र योजनाको आबश्यकताको सहि पहिचान हुनुनै विकासको काम सफल बन्ने आधार भएको उहाँको भनाई छ । जिल्लाको सबैजसो गाविसमा पुगेर योजनाको अनुगमण तथा आबश्यकताको खोजी गरिसक्नुभएका सुनुवारसँग सोलुसमाचार साप्ताहिकका लागि भोजेन्द्र बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अँश—
सोलुखुम्बुमा जिल्ला विकास समिति, गाविस, बिषयगत कार्यालय तथा अन्य दाताहरुबाट भईरहेको लगानीअनुसार विकास नभएको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण के हो ? त्यस्तो त हैन, विकास गर्दा सँधै एकै ठाउँमा गरिदैन, बजेटहरु जिल्लाका सबै भागमा गर्नुपर्ने हुन्छ । भएको छैन नै भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ, समाज बिस्तारै परिवर्तन हुने हो, त्यस्तै विकासका काममा पनि बर्षेनी सुधार भईरहेको छ । जिल्ला विकास समितिले प्राथामिकताका आधारमा काम गरिरहेको छ । फाप्लु जन्तरधाप सडकले धेरैलाई लाभान्वित बनाएको छ, गाउँघरमा लघु जलबिद्युतले निकै फाईदा दिईरहेको छ । बाम्ती—सल्लेरी सडक, गार्मा—बुढिडाँडा सडक जसले सोलुुबासीको जिविकोपार्जनमा निकै सहयोग पु¥याउने छन् । केही योजनाहरुमा समस्या पनि छ तर सकरात्मक सोचका साथ बिग्रेकालाई बनाउँदै लैजाने हो भने विकास सहज रुपमा हुन्छ । तर कतिपय बिकासका काम शुरु नहुँदै फरफारक भईसक्ने, बनेका भौतिक संरचनाहरु उपयोग नभईरहेको, भएका काममा पनि अनियमितता भएको गुनासो आईरहेको त छ नी ?
यो चाहीं स्थानीय स्तरमा भएका जनतामा अपनत्व नभएर हो । राज्यको नीति भनेको उपभोक्ता समुह मार्फत काम गराउने, सहभागीमुलक योजना छनोट गर्ने, उनिहरुलाई नै काम गराउने र बनेका संरचनाबाट उनिहरुलाई लाभान्वित गराउने हो । तर पनि नागरिकहरुले विकासका काममा आफ्नो काम भन्दा पनि सरकारको काम भन्ने सोच्नु, कतिपय असर लामो समय चलेको द्धन्द यि कारणहरुले गर्दा गाउँमा केही समस्या आएका हुन् । भएका भौतिकसंरचनाहरु मर्मतसम्भार तथा त्यसको उपयोगमा पनि जिल्ला विकास समितिले ध्यान दिईरहेको छ । भएका भौतिक संरचनाहरु प्रयोगमा नआउनुको कारण चाहीं नागरिकहरुलाई उपयोगको सचेतता नहुनु, त्यस्ता संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव लगाएतका कुरा देखेको छु । सरकार वा दाताहरुले बिकासका लागि सहयोग गर्ने मात्र हो त्यसको सहि निर्माण तथा दिगो उपयोगको जिम्मा त स्थानीय नागरिककै हुन्छ । यो कुरा स्थानीयबासीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।एकिकृत घुम्ती शिविर वा अन्य अनुगमण सुपरिबेक्षणका क्रममा गाउँमा पुग्दा मैले धेरैलाई यसबारेमा बुझो प्रयास गरेको छु । यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकमा अपनत्वको भावना हुनु जरुरी छ । यसमा विकासका लागी लगानी गर्नेहरुले आबश्यकताको सहि पहिचान नगरेकोले पनि समस्या छ भन्छन् नी ? योजना छनौट गर्दा त्यसमा आबश्यकताको सहि पहिचान नभएको पनि हुन सक्छ । मागेको योजना नपरेको कुरा गर्दा जिल्ला विकास समितिले प्राथामितालाई ध्यान दिन्छ । कतिपय आबश्यक्ताका योजना नपर्ने तथा अन्य योजना पर्ने कुरा पनि हुन सक्छ । जिल्ला विकास समितिले यो समस्या समाधानको लागि गाउँमा सामाजिक परिचालक खटाएर वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, गाविस, ईलाका आदीबाट छानिएका योजनाहरुलाई प्राथामिकता दिएर बजेट छुट्याउन थालेका छौं । यसबाट नागरिकको बास्तविक आबश्यकता पहिचान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै उपभोब्क्ता समितिले लगानी नगरेको कारण यस्तो भएकोमा चाहीं प्राबिधिक स्टमेटमा उपभोक्ताको लगानी तोकिएको हुन्छ । उनिहरुको लगानी पहिल्यै जम्मा गर्नको लागि यहाँका नागरिकहरुको आर्थिक अबस्थालाई हेर्दा समस्या हुन्छ र अहिले श्रमदान पनि कमै हुने गरेको पाईन्छ । यसमा चाहीं उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरुरी छ । त्यस्ता जिल्ला विकास समितिले स—साना टुक्रे योजनाहरु छनौट गरेको कारण पनि योजनाको प्रभावकारीता नभएको पाईन्छ नी ? तपाईले भन्नुभएको ठिक हो । दुई दिन हिडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने, रकम निकाल्न तीन जना आउनु पर्ने लगाएतका समस्याले सानो रकम त्यत्तिकै सकिन्छ र काम हुँदैन, त्यस्तै त्यसरी गरेको काम दिगो नहुने कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौं । यो कुरामा जिल्ला विकास समिति सचेत छ । अब सकेसम्म अली दिगो प्रभाव पर्ने केही ठुलै रकमका योजना छनौटको प्रयास हुन्छ तर कतै मर्मत तथा पहिरो रोकथाम लगाएतका काममा थोरै रकम भएपनि हुने छ भने त त्यस्तालाई प्राथामिकतामा राख्नै पर्छ । बिगतका केही बर्षको तथ्याङ हेर्दा जिल्लाका केही गाविसमा योजनाहरु बर्षेणी गएका छन् तर कतै कम छ, समान बितरणमा किन समस्या ? त्यो समस्यालाई नियाल्ने प्रयास गरिरहेका छौं । बिगतमा के भयो भन्ने समिक्षा हामीले गरिसक्यौं । अबका दिनहरुमा गाविस, ईलाका हुँदै आएका योजनालाई प्राथामिकता दिने, तल्लो तहबाटै योजना छनौटमा सहयोग गर्ने जस्ता काम भईरहेकोले अबका दिनमा जिल्लाको बजेट आबश्यकताको आधारमा जिल्लाका हरेक गाविसमा समान बितरण हुन्छ । अन्तमा जिल्ला विकास समितिका गतिबिधिहरु हेर्न चाहेमा नागरिकले कति सहजसँग उपलब्ध गर्न सक्छन् ? एकदमै सहज रुपमा पाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँमा के योजना परेको छ ? कस्तो काम हनुपर्ने हो ? कति बजेट छ, कहाँ के भईरहेको छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने जिल्ला विकास समितिमा आउनुस हामी सहज रुपमा सबै कुरा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने छौं । मलाई त लागछ नागरिक सचेत भएर खोजी गर्ने हो भने जिल्ला विकास समितिललाई अझ राम्रो काम गर्न दवाव र वा हौसला मिल्ने छ । प्रतिक्रियाहरु: No feed back Yet...
कालापत्थरबाट सगरमाथा हेर्दा सोलुमा पौडिन थाले ट्राउट लोभलाग्दो उचाई शिक्षक मृत फेला देवी उत्पत्ती गराएको विश्वासमा सयौंको भिड (फोटो फिचर) फाटेको मन लेकको आलु र औलको खुर्सानी सन्तोष पन्तकी छोरी किन आक्रोशित ? अनेरास्ववियू सोलुखुम्बुको १० औ जिल्ला अधिवेशन तयारी तिव्र राष्ट्रनिर्माणमा युवाहरुको भूमिका जीवनबाट नहारौं, संघर्षबाट नहारौं, जीवन भनेकै संघर्ष हो । कस्तो विकास ? कसरी विकास ? Solukhumbu News